Wafdi ka socda Beesha Calaamka oo shirar wadatashi ah ugu tagi doona Dowlad Goboleedyadda! Maxaa soo kordhay? - Muqdisho Online
Home Wararka Wafdi ka socda Beesha Calaamka oo shirar wadatashi ah ugu tagi...
Wafdi ka socda Beesha Calaamka oo shirar wadatashi ah ugu tagi doona Dowlad Goboleedyadda! Maxaa soo kordhay?
Shirar goos goos ah oo ay beesha caalamku ku lahaayeen magaalooyinka Nairobi iyo Muqadishu ayaa waxa lagu go’aamiyay in wafdi sare loo diro Dowlad Goboleedyadda Soomaaliya. Madaxda Dowlad Goboleedyadda ayaa horay u diiday in ay shir wadatashi ah u tagaan magaalada Nairobi, waxaana ay ku adkeeyeen beesha caalamka in ay shirarkooda lagu qabto dalka gudahiisa.
Wafadigaan oo isgu jira qaar ka socda Qaramada Midoobay, IGAD, AMISOM, EU iyo safiiro wakiil ka ah wadamada deeqaha siiya Soomaaliya ayaa waxa ay dhawaan u safri doonaan magalaa madaxda Dowlad Goboleedyada halkaas oo ay kula shiri donaan madaxda Dowlad Goboleedyadda.
Safarka ugu horeeya ayaa waxa la filayaa in ay wafdigaas ku tagaan magaalada Kismaanyo halkaas oo ay kula kulmi doonaan Madaxweyne Axmad Madoobe. Beesha Caalamka ayaa waxa ay doonaysaa in ay wadatashiyo gaar ah la sameeyaan madaxda Dowlad Goboleedyada, marka ay soo dhamaadaan Wadatashiyadaas ayaa waxa la filayaa in beesha Caalamka ay iclaamiso shir weyne guud oo la isugu keenayo Dowlada Fedaraalka iyo Dowlad Goboleedyadda.
Talaabada ay beesha caalamka qaadayso asbuucaan dhexdiisa ayaa waxa uu wadada u furayaa in Dowlada Fedaraalka ay lumiso awoodii ay dalka ku maamulaysay. Qubarada u kuurgasha arimaha Soomaaliya ayaa rumaysan in sida kaliya ee Soomaaliya uga gudbi karto qalalaasaha siyaasadeed ay tahay in la sameeyo “Road Map” kaas oo ku qasbayo dhinacyada ishaysta in ay ku dhaqmaan.
Previous articleShirkadihii shiinaha ee shatiga la siiyay oo soo shubay lacagtii u horeeysay iyo Kheyre oo la wareegay maamulka lacagtaas
Next article(Daawo) Farmaajo “Xaaf wuxuu diiday dawadii loo qoray, wuxuuna rabay muddo kororsi, waana ka diidnay”